Mikel Arteta Oo Ka Hadlay Shaqada Tababarnimo Ee Kooxda Barcelona.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Mikel Arteta oo ka hadlay Shaqada tababarnimo ee kooxda barcelona.
Mikel Arteta lama yaabin inuu isu arko inuu xiriir la leeyahay shaqada Barcelona intii lagu jiray doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Camp Nou todobaadkan.
Tababaraha kooxda Arsenal ayaa qaba in xiriirka isaga iyo Barca, halkaas uu ka bilaabay xirfadiisa ciyaareed, ay tahay lama huraan Si kastaba ha noqotee, Arteta wuxuu ku adkeystay inuu si buuxda diirada u saarayo maanta iyo berri inuu ku saabsan yahay maareynta Arsenal.
Arteta wuxuu ku guuleystay FA Cup iyo Community Shield horaantii 14-kii bilood ee uu ugu horeeyey laakiin xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee buuxa wuxuu cadeeyay inay ka sii adag yihiin.
Arsenal ayaa ku jirta kaalinta 10aad ee Premier League iyagoo galaya kulanka sabtida ee ay la ciyaarayaan kooxda Burnley, in kasta oo ay guul soo laabasho ah ka gaareen Leicester City markii ugu dambeysay.
Gunners ayaa sidoo kale gaartay Europa League 16kii ugu dambeysay Arteta ayaa carabka ku adkeysay inay jiraan waxyaabo badan oo la sameeyo.
Arteta ayaa u sheegay shir jaraa’id iyadoo ay jiraan warar sheegaya in musharraxa hogaaminaya Joan Laporta uu doonayo inuu shaqaaleeyo.
Waa koox aad u weyn. Sida iska cad, halkaas ayaa laygu soo koray anigoo ciyaartoy ah marwalbana waa lala xiriirin doonaa.
Laakiin waxaan si buuxda diiradda u saarayaa shaqada ay tahay inaan halkan ku sameeyo, oo aan wax badan ka qabanno, runtiina waan ku raaxeysanayaa Maanta iyo berri waxaan ahay maamulaha kooxda kubada cagta Arsenal.
Xaqiiqdii waan ku raaxeysanayaa waxaanan doonayaa inaan sameeyo wax ka fiican wixii aan qabanay.
Ma aqaan waxa ka duwan tababarista Barca ama Arsenal Waxa aan kuu sheegi karo waa in aan dareemayo mudnaan in aan maareeyo naadigan kubbadda cagta aad ayaan ugu faraxsanahay.
Isagoo carrabka ku adkeeyay sida ay uga go’an tahay Arsenal, Arteta waxaa lagu cadaadiyey inuu bilaabay wadahadalo qandaraas uu la galo kooxdiisa haatan.
Tababaraha reer Spain ayaa shaaca ka qaaday inuusan heysan, laakiin ma uusan dareemin inay tahay arin culeys ah madaama heshiiskiisa uu socdo ilaa 2023.
Arteta ayaa intaas ku daray Wax badan ayaan u ciyaarnaa waqtigan xaadirka ahna ma ahan mudnaan.
Taasi waa hagaag, wali qandaraas ayaan ku hayaa halkan, waan ku faraxsanahay halkaan mana u maleynayo inay tahay wax deg deg ah.
Ujeeddadu waa in la sii wado oo la garaaco Burnley, waxaan muddo ku eryanaynay [afar-meelood meel sare] laakiin gacanteenna kuma jirto.
Waxa kaliya ee aan xakamayn karno waa natiijooyinkeena iyo qaab ciyaareedkeena.
Waxaan si buuxda u go’aansanay inaan sameyno taas oo ka wanaagsan wixii aan qabanay sideedii bilood ee la soo dhaafay.
Previous articleN’Golo Kante: oo ka hadlay Kulanka Chelsea ee Liverpool la ciyaaridoonta iyo rajadiisa
Next articleChelsea iyo bayern Munchen kuma biiri doono Erling Haalan oo hadlay.